Akụkọ - Gini mere ị ga eji ahọrọ igwe
Dika ala ulo ahia na ugboala bu ndi marble ma obu seramiiki, udiri ala ndi di otua nwere ihe di elu choro maka idi ocha, ka emechara, ha na-anochite onyogho nke ebe ohaneze. Ya mere, a ga-eji nlezianya rụọ ọrụ nhicha ahụ. Nke nta nke nta, ụfọdụ usoro nhicha ọdịnala agaghị enwe ike imezu ihe nhicha nke oge ndị a, ntoputa na ntinye nke igwe na-ehicha ala ejirila dochie anya ọrụ aka na nhicha ala n'ọtụtụ ụlọ ọrụ.
Na usoro nhicha omenala, enwere ọnọdụ mgbe ebe nhicha adịghị, dịka ụfọdụ nkuku nwụrụ anwụ ma ọ bụ ntụpọ ụfọdụ siri ike iwepụ. Ọ bụrụ na stains na-agbakọ oge niile, ala ga-acha odo odo na ọchịchịrị mgbe oge ụfọdụ gasịrị, na-emetụta ọmarịcha mma. Ọzọkwa, mpaghara nke ebe ọha a buru ibu buru ibu, ọ bụrụ na ịchọrọ ịrụ ezigbo ọrụ nke ihicha ala, ịkwesịrị iwebata ọtụtụ ndị ọrụ nhicha iji mezuo, nke bụ nnukwu mmefu na ụgwọ ọrụ.
Ojiji nke igwe ihichapu ala nwere ike idozi nsogbu ndị a kpọtụrụ aha n'elu. Ọ bụ tumadi ọrụ igwe. Naanị ị ga - agbakwunye nchacha, nke na - abụghị naanị mezue nhicha ala, kamakwa nwere uru nke ịbelata ike ọrụ nke ndị na - ehicha ihe, meziwanye arụmọrụ nhicha na ibelata ụgwọ ọrụ nhicha. Ka ọ dị ugbu a, teknụzụ nke ihicha igwe na-aga n'ihu n'ihu, ka anyị chere ma hụ.
Site na mmepe nke sayensị na teknụzụ, ụzọ nhicha dị ọcha na ngwa ngwa nke akụrụngwa nyere anyị dị ka graders moto na brushes n'ala na-esiwanye ike ịhapụ. Karịsịa na oge nke igwe ọrụ nwere ọgụgụ isi, arụmọrụ na mma dị mkpa.
Dị ka ụlọ ahịa, ụlọ ahịa na ọdụ ụgbọ oloko nke anyị na-agakarị ma na-esi na ya aga, oge ụfọdụ anyị nwere ike ịhụ ọnụ ọgụgụ nke ngwa ngwa dị iche iche dịka igwe ihicha ala.